” ဗီဇ “ ကိုတော့ ဖုံးကွယ်မထားနိုင်ပါဘူး - Barnyar Barnyar
တဈခါက… လူတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့တတျအပျတဲ့ပညာနဲ့ နနျးတျောမှာအမှုထမျးလိုကွောငျးပွောတော့ မှူးမတျတှကေနတေဆငျ့ ဘုရငျ့ရှတေ့ျောမှောကျကို ရောကျလာတယျ…။
ရှငျဘုရငျက… ” မောငျမငျး ဘာပညာတတျလဲ ” လို့ မေးတော့ အမှုတျောထမျးလိုသူက ရဲရဲဝံ့ဝံ့လြောကျတယျ… ” ကြှနျတျောမြိုး… သကျရှိ သတ်တဝါတှကေို မှနျကနျစှာခနျ့မှနျးတဲ့ပညာကို တတျကြှမျးပါတယျ” တဲ့ ။
ရှငျဘုရငျဟာ သူ့ကို နရောကောငျးပေးဖို့ နရောအလှတျ မရှိတာနဲ့ မကွာသေးခငျက မွငျးထိနျးတဈဦးသသှေားတာမို့ အဲ့ဒီ နရောလေးကို သူ့အားပေးလိုကျတယျ။
ရကျအနညျးငယျကွာတော့… ရှငျဘုရငျဟာ သကျရှိ သတ်တဝါတှကေို မှနျကနျစှာခနျ့မှနျးတဲ့ပညာကိုတတျကြှမျးပါတယျ ဆိုတဲ့ မွငျးထိနျးနရောရောကျနတေဲ့သူရဲ့ပညာကို သိလိုတာနဲ့ ချေါပွီး သူ့ရဲ့အကွိုကျဆုံး မွငျးရဲ့အကွောငျးကိုမေးတော့တယျ…။
” မောငျမငျး ငါ့ရဲ့ ဒီစီးတျောမွငျးဟာ… မြိုးစဈမြိုးမှနျ ဟုတျရဲ့လား ” ” မှနျလှပါ… အရှငျမငျးကွီးရဲ့မွငျးဟာ မြိုးစဈမြိုးမှနျ မဟုတျပါဘူး ” ရှငျဘုရငျဟာ တအံ့တသွဖွဈသှားတယျ ။ ဒါနဲ့ ယခငျ မွငျးပိုငျရှငျကိုဆငျ့ချေါပွီး မေးတော့ ယခငျမွငျးပိုငျရှငျက…
” အရှငျမငျးကွီး မွငျးကတော့ မြိုးစဈမြိုးမှနျပါ… ဒါပမေဲ့… သူအမဟော သူကိုမှေးပွီးသသှေားခဲ့ပါတယျ… ဒါကွောငျ့.. ကြှနျတျောမြိုးဟာ အဲဒီ မွငျးကို နှားနို့တိုကျပွီး မှေးခဲ့ရပါတယျ” လို့ လြောကျထားလတေယျ။
ရှငျဘုရငျဟာ မွငျးထိနျးကိုချေါပွီး မေးတယျ.. ” မောငျမငျးက… မြိုးစဈ မြိုးမှနျ မဟုတျဘူးဆိုတာ ဘယျလိုသိလဲ ” ” မှနျလှပါ အရှငျမငျးကွီး ဒီမွငျးဟာ အစာကိုစားတဲ့အခါမှာ နှားမြားလို ခေါငျးကို ငုံ့ပွီးစားပါတယျ… တကယျ မြိုးစဈသောမွငျးဟာ အစာကိုပါးစပျမှာယူပွီး ခေါငျးကိုမော့လို့ စားပါတယျ ”
ရှငျဘုရငျဟာ သူ့ရဲ့ပညာကို အလှနျလေးစားတနျဘိုးထားပွီး သူ့ထံကို ထောပတျတှေ ကွကျကွျော ငှကျကွျောတှေ, အသီးအနှံတှေ မြားစှာပို့လို့ ဆုခြီးမွှငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့… သူကို မိဖုရားဆောငျနဲ့ နီးတဲ့နရောမှာ နရောပေးလိုကျပါတယျ။
ရကျအနညျးငယျကွာတော့… ရှငျဘုရငျက သူ့ကို မိဖုရားနဲ့ ပတျသကျပွီးမေးတော့ သူကဖွတေယျ… ” မိဖုရားရဲ့ နပေုံထိုငျပုံကတော့ မငျးမြိုးမငျးနှယျကလို့ ထငျရပါတယျ… ဒါပမေယျ့ မိဖုရားဟာ မငျးမြိုးမငျးနှယျက မဟုတျပါဘူး ”
ရှငျဘုရငျဟာ တအံ့တသွနဲ့ ယောကျခမဖွဈသူကို ချေါပွီးမေးပွနျတယျ…” ဟုတျပါတယျ မငျးကွီး မငျးကွီးရဲ့ ခမညျးတျောက ကြှနျုပျရဲ့ခငျပှနျးထံက သမီးမှေးရငျ ပေးစားမယျပွောထားခဲ့ပါတယျ…
တကယျတော့ ကြှနျုပျတို့ သမီးအရငျးဟာ ကံဆိုးစှာ 6လနဲ့ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ… ဒါနဲ့ ကြှနျုပျတို့လညျး မငျးမြိုးမငျးနှယျနဲ့ အမြိုးမတျောရမှာ စိုးတာကွောငျ့ သူမြားရဲ့သမီးကို မှေးစားလိုကျရပါတယျ ” လို့ ကွားသိရတော့မှ မွငျးထိနျးကိုချေါပွီး မေးတယျ.. ” မိဖုရားဟာ မငျးမြိုးမငျးနှယျက မဟုတျဘူးဆိုတာ မောငျမငျး ဘယျလို သိတာလဲ ”
” မှနျလှပါ… မိဖုရားရဲ့ဆကျဆံမှုက အလုပျသမားတှအေပျေါမှာ မိဖုရားတဈယောကျပုံစံ မဟုတျပဲ တကယျ့ကို ပညာမဲ့သူတှရေဲ့ပုံစံနဲ့တူနလေို့ပါ ” လို့လြှောကျထားတယျ။
ရှငျဘုရငျဟာ သူ့ရဲ့ပညာကို အလှနျလေးစားတနျဘိုးထားပွီး အရငျလိုပဲ ထောပတျတှေ ကွကျကွျောငှကျကွျောတှေ အသီးအနှံတှေ မြားစှာပို့ပွီး ခြီးမွှငျ့ပွနျပါတယျ ။ ပွီးတော့လညျး သူ့ကို နနျးတျောထဲမှာ နရောပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ရကျအနညျးငယျကွာတော့ သူ့ကိုချေါပွီး…
” ကဲ အခု… ငါ့အကွောငျးကိုပွောပါ ” ဆိုတော့ အမှုတျောထမျးက… ” ကြှနျတျောမြိုးရဲ့ အသကျအတှကျ အာမခံခကျြရှိရငျ ပွောပါမယျ ” လို့ တောငျးဆိုလိုကျတယျ ။
ဘုရငျကလညျး ” ကောငျးပွီ ငါကတိပေးတယျ ” ဆိုတော့မှ…” အရှငျမငျးကွီးဟာ ဘုရငျ့သားတျောမဟုတျသလို ဘုရငျအမြိုးအနှယျကလညျး မဟုတျပါဘူး ”
အဲ့ဒီစကားကွောငျ့ ရှငျဘုရငျဟာ အလှနျဒေါသထှကျပွီး သတျမယျလုပျတော့ သူကိုယျတိုငျ ကတိပေးထားတာကို သတိရပွီး စိတျလြှော့လိုကျတယျ။
ဒါနဲ့ ခကျြခငျြးဆိုသလို မယျတျောကွီးအထံကို သှားရောကျမေးတယျ။ မယျတျောက… ” ဟုတျပါတယျ.. မငျးဟာ နှားကြောငျးသားတဈယောကျရဲ့ သားဖွဈတယျ… ငါတို့မှာ ကလေးမရနိုငျတော့ မငျးကို ချေါပွီး မှေးစားလိုကျတာဖွဈတယျ ” ဆိုတော့မှ အမှုထမျးကို ချေါပွီး မေးတယျ…
” မောငျမငျးက ငါ့ကို ဘုရငျ အမြိုးအနှယျထဲက မဟုတျဘူးဆိုတာ ဘယျလိုသိလဲ? “အမှုတျောထမျးက… ” ရှငျဘုရငျဆိုတာ တဈယောကျ ယောကျကို လကျဆောငျပေးရငျ စိနျတှေ ရှတှေေ စတဲ့ အဖိုးတနျ အကောငျးစား ပစ်စညျးမြိုးကိုသာ ပေးတတျပါတယျ
အခု အရှငျမငျးကွီးဟာ လကျဆောငျပေးတဲ့အခါ စားစရာ သောကျစရာ အသီးအနှံတှသော ပေးတယျ.. ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ အရှငျမငျးကွီးဟာ ဘုရငျမြိုး ဘုရငျအနှယျက မဖွဈနိုငျဘူး… နှားကြောငျးသား တဈဦး ဦးရဲ့သားပဲ ဖွဈရမယျဆိုတာ သိရပါတယျ ” လို့ ဖွကွေားလိုကျပါတော့တယျ။
ဘဝမှာ… ကိုယျဘကျက ဘယျလောကျပဲ အထကျတနျးကတြယျလို့ပဲပွောပွော.. ကိုယျ့ရဲ့အပွုအမူအပွောအဆိုတှဟော အထကျတနျးကမြနခေဲ့ရငျ ဘယျသူကမှအထကျတနျးကတြယျလို့ မသကျမှတျပါဘူး…
ဘယျလောကျပဲ အဆငျ့အတနျးတှနေိမျ့ကတြယျလို့ပဲဆိုဆို… ကိုယျ့ရဲ့အပွုအမူအပွောအဆိုတှဟော နိမျ့ကမြနခေဲ့ရငျ ဘယျသူကမှ နိမျ့ကတြယျလို့ မမွငျပါဘူး…
မကောငျးတဲ့အပွုအမူ… မကောငျးတဲ့ အပွောအဆိုတှဟော မကောငျးတဲ့မြိုးရိုးဗီဇပါပဲ… ဒါ့ကွောငျ့… လူကွီးသူမတှကေ.. ” ကိုယျကွမျးတော့ အဖယုတျတယျ.. နှုတျကွမျးတော့ အမိယုတျတယျ ” လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ ။
ပိုကျဆံဘယျလောကျပဲရှိရှိ.. ကောငျးတဲ့အပွုအမူအပွောအဆိုတှမေရှိရငျ မကောငျးတဲ့ဗီဇရှိသူပါပဲ။
” ​ဗီဇ “ ကိုတော့ ဖုံးကှယျမထားနိုငျပါဘူး
တစ်ခါက… လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့တတ်အပ်တဲ့ပညာနဲ့ နန်းတော်မှာအမှုထမ်းလိုကြောင်းပြောတော့ မှူးမတ်တွေကနေတဆင့် ဘုရင့်ရှေ့တော်မှောက်ကို ရောက်လာတယ်…။
ရှင်ဘုရင်က… ” မောင်မင်း ဘာပညာတတ်လဲ ” လို့ မေးတော့ အမှုတော်ထမ်းလိုသူက ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျောက်တယ်… ” ကျွန်တော်မျိုး… သက်ရှိ သတ္တဝါတွေကို မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတဲ့ပညာကို တတ်ကျွမ်းပါတယ်” တဲ့ ။
ရှင်ဘုရင်ဟာ သူ့ကို နေရာကောင်းပေးဖို့ နေရာအလွတ် မရှိတာနဲ့ မကြာသေးခင်က မြင်းထိန်းတစ်ဦးသေသွားတာမို့ အဲ့ဒီ နေရာလေးကို သူ့အားပေးလိုက်တယ်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့… ရှင်ဘုရင်ဟာ သက်ရှိ သတ္တဝါတွေကို မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတဲ့ပညာကိုတတ်ကျွမ်းပါတယ် ဆိုတဲ့ မြင်းထိန်းနေရာရောက်နေတဲ့သူရဲ့ပညာကို သိလိုတာနဲ့ ခေါ်ပြီး သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး မြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့တယ်…။
” မောင်မင်း ငါ့ရဲ့ ဒီစီးတော်မြင်းဟာ… မျိုးစစ်မျိုးမှန် ဟုတ်ရဲ့လား ” ” မှန်လှပါ… အရှင်မင်းကြီိးရဲ့မြင်းဟာ မျိုးစစ်မျိုးမှန် မဟုတ်ပါဘူး ” ရှင်ဘုရင်ဟာ တအံ့တသြဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါနဲ့ ယခင် မြင်းပိုင်ရှင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီး မေးတော့ ယခင်မြင်းပိုင်ရှင်က…
” အရှင်မင်းကြီး မြင်းကတော့ မျိုးစစ်မျိုးမှန်ပါ… ဒါပေမဲ့… သူအမေဟာ သူကိုမွေးပြီးသေသွားခဲ့ပါတယ်… ဒါကြောင့်.. ကျွန်တော်မျိုးဟာ အဲဒီ မြင်းကို နွားနို့တိုက်ပြီး မွေးခဲ့ရပါတယ်” လို့ လျောက်ထားလေတယ်။
ရှင်ဘုရင်ဟာ မြင်းထိန်းကိုခေါ်ပြီး မေးတယ်.. ” မောင်မင်းက… မျိုးစစ် မျိုးမှန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိလဲ ” ” မှန်လှပါ အရှင်မင်းကြီး ဒီမြင်းဟာ အစာကိုစားတဲ့အခါမှာ နွားများလို ခေါင်းကို ငုံ့ပြီးစားပါတယ်… တကယ် မျိုးစစ်သောမြင်းဟာ အစာကိုပါးစပ်မှာယူပြီး ခေါင်းကိုမော့လို့ စားပါတယ် ”
ရှင်ဘုရင်ဟာ သူ့ရဲ့ပညာကို အလွန်လေးစားတန်ဘိုးထားပြီး သူ့ထံကို ထောပတ်တွေ ကြက်ကြော် ငှက်ကြော်တွေ, အသီးအနှံတွေ များစွာပို့လို့ ဆုချီးမြှင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့… သူကို မိဖုရားဆောင်နဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ နေရာပေးလိုက်ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့… ရှင်ဘုရင်က သူ့ကို မိဖုရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးတော့ သူကဖြေတယ်… ” မိဖုရားရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံကတော့ မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကလို့ ထင်ရပါတယ်… ဒါပေမယ့် မိဖုရားဟာ မင်းမျိုးမင်းနွယ်က မဟုတ်ပါဘူး ”
ရှင်ဘုရင်ဟာ တအံ့တသြနဲ့ ယောက်ခမဖြစ်သူကို ခေါ်ပြီးမေးပြန်တယ်…” ဟုတ်ပါတယ် မင်းကြီး မင်းကြီးရဲ့ ခမည်းတော်က ကျွန်ုပ်ရဲ့ခင်ပွန်းထံက သမီးမွေးရင် ပေးစားမယ်ပြောထားခဲ့ပါတယ်…
တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ သမီးအရင်းဟာ ကံဆိုးစွာ 6လနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်… ဒါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း မင်းမျိုးမင်းနွယ်နဲ့ အမျိုးမတော်ရမှာ စိုးတာကြောင့် သူများရဲ့သမီးကို မွေးစားလိုက်ရပါတယ် ” လို့ ကြားသိရတော့မှ မြင်းထိန်းကိုခေါ်ပြီး မေးတယ်.. ” မိဖုရားဟာ မင်းမျိုးမင်းနွယ်က မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မောင်မင်း ဘယ်လို သိတာလဲ ”
” မှန်လှပါ… မိဖုရားရဲ့ဆက်ဆံမှုက အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာ မိဖုရားတစ်ယောက်ပုံစံ မဟုတ်ပဲ တကယ့်ကို ပညာမဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံနဲ့တူနေလို့ပါ ” လို့လျှောက်ထားတယ်။
ရှင်ဘုရင်ဟာ သူ့ရဲ့ပညာကို အလွန်လေးစားတန်ဘိုးထားပြီး အရင်လိုပဲ ထောပတ်တွေ ကြက်ကြော်ငှက်ကြော်တွေ အသီးအနှံတွေ များစွာပို့ပြီး ချီးမြှင့်ပြန်ပါတယ် ။ ပြီးတော့လည်း သူ့ကို နန်းတော်ထဲမှာ နေရာပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ကိုခေါ်ပြီး…
” ကဲ အခု… ငါ့အကြောင်းကိုပြောပါ ” ဆိုတော့ အမှုတော်ထမ်းက… ” ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ အသက်အတွက် အာမခံချက်ရှိရင် ပြောပါမယ် ” လို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ် ။
ဘုရင်ကလည်း ” ကောင်းပြီ ငါကတိပေးတယ် ” ဆိုတော့မှ…” အရှင်မင်းကြီးဟာ ဘုရင့်သားတော်မဟုတ်သလို ဘုရင်အမျိုးအနွယ်ကလည်း မဟုတ်ပါဘူး ”
အဲ့ဒီစကားကြောင့် ရှင်ဘုရင်ဟာ အလွန်ဒေါသထွက်ပြီး သတ်မယ်လုပ်တော့ သူကိုယ်တိုင် ကတိပေးထားတာကို သတိရပြီး စိတ်လျှော့လိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို မယ်တော်ကြီးအထံကို သွားရောက်မေးတယ်။ မယ်တော်က… ” ဟုတ်ပါတယ်.. မင်းဟာ နွားကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ သားဖြစ်တယ်… ငါတို့မှာ ကလေးမရနိုင်တော့ မင်းကို ခေါ်ပြီး မွေးစားလိုက်တာဖြစ်တယ် ” ဆိုတော့မှ အမှုထမ်းကို ခေါ်ပြီး မေးတယ်…
” မောင်မင်းက ငါ့ကို ဘုရင် အမျိုးအနွယ်ထဲက မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိလဲ? “အမှုတော်ထမ်းက… ” ရှင်ဘုရင်ဆိုတာ တစ်ယောက် ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးရင် စိန်တွေ ရွှေတွေ စတဲ့ အဖိုးတန် အကောင်းစား ပစ္စည်းမျိုးကိုသာ ပေးတတ်ပါတယ်
အခု အရှင်မင်းကြီးဟာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ စားစရာ သောက်စရာ အသီးအနှံတွေသာ ပေးတယ်.. ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အရှင်မင်းကြီးဟာ ဘုရင်မျိုး ဘုရင်အနွယ်က မဖြစ်နိုင်ဘူး… နွားကျောင်းသား တစ်ဦး ဦးရဲ့သားပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ သိရပါတယ် ” လို့ ဖြေကြားလိုက်ပါတော့တယ်။
ဘဝမှာ… ကိုယ်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ အထက်တန်းကျတယ်လို့ပဲပြောပြော.. ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုတွေဟာ အထက်တန်းကျမနေခဲ့ရင် ဘယ်သူကမှအထက်တန်းကျတယ်လို့ မသက်မှတ်ပါဘူး…
ဘယ်လောက်ပဲ အဆင့်အတန်းတွေနိမ့်ကျတယ်လို့ပဲဆိုဆို… ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုတွေဟာ နိမ့်ကျမနေခဲ့ရင် ဘယ်သူကမှ နိမ့်ကျတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး…
မကောင်းတဲ့အပြုအမူ… မကောင်းတဲ့ အပြောအဆိုတွေဟာ မကောင်းတဲ့မျိုးရိုးဗီဇပါပဲ… ဒါ့ကြောင့်… လူကြီးသူမတွေက.. ” ကိုယ်ကြမ်းတော့ အဖယုတ်တယ်.. နှုတ်ကြမ်းတော့ အမိယုတ်တယ် ” လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ ။
ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ.. ကောင်းတဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုတွေမရှိရင် မကောင်းတဲ့ဗီဇရှိသူပါပဲ။